Efa 25 taona nifohana izy ary nahalany roa fonosana isan’andro teo aloha ary efa nahenany efatra isa isan’andro amin’izao. Anisan’ireo tonga tetsy amin’ny tahala rarihasina Analakely izy naka torohevitra ny amin’ny hahafahany miala amin’ny sigara. Tsapany mantsy fa ratsy ny sigara ary toy ny mandoro vola mihitsy ny fividianana azy ity. Raha ny nambarany anefa dia asa tena no ivelomany nefa ilay sigara tsy mitsahatra miakatra ny vidiny. Ankoatra ity raim-pianakaviana ity, ankizy sy tanora marobe no tonga teny an-toerana hatramin’ny sabotsy teo, hetsika nokarakarain’ny “Centre de Cure Aro Aina” etsy Andravoahangy hanalana ny mpiara-belona amin’ny fiankinan-doha amin’ny mahadomelina. Nomarihin’ny dokotera Andriamiarinarivo Miarintsoa moa fa ora valo aorian’ny fialan’ny olona sigara monja dia efa mahita vokatra izy ka anisan’ireny ny fihenan’ny poizina amin’ny vatany sy ny fahazoan’ny sela aina.